Faa'iidooyinka Joojinta: Sababaha Sigaarka Loogu Sagootiyo | Ragga Stylish
Miguel Serrano | | Ku habboon, Caafimaadka
Ogaanshaha faa'iidooyinka cajiibka ah ee joojinta sigaarku waxay kaa caawin kartaa inaad go'aan ka gaadho inaad joojinayso iyo in kale waxaad ubaahantahay inaad sagootid waligaa sigaarka laakiin waxaad ubaahantahay xoogaa riixid ah.
Waxaa jira sababo badan oo dadaal ka dhigaya joojinta sigaar cabista. Aan aragno waxa ay yihiin.
1 Faa'iidooyinka weyn ee joojinta sigaarka u leedahay caafimaadkaaga
1.1 Xoojinta wadnaha iyo sambabada
1.2 Ka hortagga cudurka
1.3 Xaalad jireed oo ka wanaagsan
1.4 Waxaad sidoo kale ilaalisaa caafimaadka dadka kale
1.5 Udgoon fiican
1.6 Cunnadu way dhadhan fiican tahay
1.7 Duuduub yar
1.8 Nolosha galmada ka wanaagsan
1.9 Lacag ayaad keydisaa
Faa'iidooyinka weyn ee joojinta sigaarka u leedahay caafimaadkaaga
Diyaar ma u tahay inaad joojiso sigaar cabista? Hadday jawaabtu haa tahay, go'aanka xiga ee ay tahay inaad sameyso ayaa ah inaad keligaa sameyso ama aad gargaar caafimaad la yeelatid. Sharad ku samee habka adiga kuugu fiican oo ha quusan haddii aadan ku helin isku dayga ugu horreeya. Taasina waa in qaarkood ay ku guuleystaan ​​markii ugu horeysay, halka kuwa kale ay u baahan yihiin isku day badan.
Joojinta ma fududa. Xaqiiqdii, dadka badankood ee joojiyay sigaarka waxay isku raacsan yihiin inay tahay mid ka mid ah waxyaabihii ugu adkaa ee ay abid sameeyaan. Sababta ayaa ah joojinta sigaarka waxay u baahan tahay inaad ka tagto wax qayb ka ah hawl maalmeedkaaga. Badanaa, sigaar shididda waa waxqabadka ugu horreeya ee maalinta. Sidoo kale, sigaarcabku badanaa wuxuu dadka ka dhigaa inay fiicnaadaan markay walbahaaraan ama murugoodaan. Iyada oo ay waxaas oo dhami jiraan, waa inaadan waligaa ilaawin inaad daaweyneyso balwad, gaar ahaan inta lagu gudajiro joojinta.
Wax badan oo allabaryo ah oo nolosha la fuliyo ma leh wax abaalmarin ah, laakiin midka ina khuseeya markan ma aha mid ka mid ah. Joojinta sigaarku waxay leedahay faa'iidooyin badan, xitaa haddii aad sigaar cabto inta badan noloshaada. Faa'iidooyinka qaar ayaa la ogaan karaa maalmo gudahood, halka kuwa kalena laga yaabo inay qaataan toddobaadyo. Dulqaad yeelo, sida markaad sigaarka joojiso kadib, waxaad hubin kartaa inaad ku socoto wadada saxda ah.
Xoojinta wadnaha iyo sambabada
Wadnaha iyo sambabada waxay ku lumiyaan awood tubaakada darteed. Nasiib wanaag, dhiiggu wuxuu bilaabaa inuu sifiican ugu dhex wareego jirka markuu shaqsigu joojiyo sigaarka. Tani waa muhiim, maaddaama wareegga dhiigga ee ku filan uu muhiim u yahay soo celinta shaqada caadiga ah ee xubnahan, iyo sidoo kale in la yareeyo halista wadno qabadka.
Ka hortagga cudurka
Marka ay timaado nidaamka difaaca jirka, waxaa muhiim ah in la helo caadooyin wanaagsan sida ay tahay in la joojiyo kuwa xun.. Jimicsiga joogtada ah iyo cunista miraha iyo khudradda ku filan waxay faa'iido badan u yeelan doonaan difaacaaga haddii ay la socoto joojinta sigaar cabista iyo cabbitaanka qamriga oo dhexdhexaad ah.
Mid ka mid ah faa'iidooyinka ugu muhiimsan ee joojinta sigaarka ayaa ah halista dhimista noocyada kala duwan ee kansarka, oo ay ku jiraan sambabada iyo hunguriga. Ugu dambeyntiina, waxaad sidoo kale u nuglaaneysaa infekshannada.
Xaalad jireed oo ka wanaagsan
Haddii aad go'aansato inaad ku noolaato tubaako la'aan, habka neefsashadaadu wuxuu ka mid noqon doonaa ka-faa'iideystayaasha ugu waaweyn. Kordhinta oksijiinta ayaa laga soo saari doonaa jirkaaga, taas oo kuu oggolaan doonta inaad sare u qaaddo heerarka tamartaada iyo, guud ahaan, inaad ku raaxeysato xaalad jireed oo wanaagsan.
Macsalaameynta tubaakada waxay kaa caawin doontaa inaad hagaajiso xaaladdaada jireed iyo, natiijada ka soo baxdaan, waxaad ka heli doontaa natiijooyin wanaagsan jimicsigaaga.
Waxaad sidoo kale ilaalisaa caafimaadka dadka kale
Joojinta sigaarka kaliya kuuma anfacayso. Sidoo kale waxay u fiican tahay caafimaadka dadka kugu xeeran.
Inta badan dhibaatooyinka soo raaca ee sigaarcabku waa kuwo si muuqata loogu ogaan karo dadka kale. Kuwa kuwa kale ay ku ogaan karaan jaleecada hore way yar yihiin, laakiin waxay ku dhacaan meel muhiim u ah sawirka: afkaaga. Tubaakadu waxay waxyeello u leedahay nadaafadda afka, waxayna keentaa ur xun iyo ilkaha oo hurdi. Nidaam nadaafadeed oo wanaagsan, oo leh saddex jeer ama ka badan burushka maalintii, ayaa yareyn kara dhibaatada, laakiin kuma filna. Haddii aad rabto in afkaagu mar labaad sameeyo aragti weyn markale, waa inaad nuugtaa dhibaatada ku taal burooyinka.
Neefta mooyee, Waxaad sidoo kale hagaajin doontaa urka dharkaaga, iyo sidoo kale kan gurigaaga iyo gaarigaaga.
Cunnadu way dhadhan fiican tahay
Sigaar cabayaasha waxaa loo tixgeliyaa inay leeyihiin dareemo firfircoon oo dhadhan iyo urba leh marka loo eego kuwa aan sigaarka cabbin Nasiib wanaagse, dhibaatada tubaakadu u geysato afka iyo sanka waa laga noqon karaa. Muddo ka dib, dareemayaasha ayaa u muuqda inay is furayaan waxayna ku soo laabanayaan sidii caadiga ahayd, taasoo ka dhigeysa inay dhadhankaadu kuu fiicnaanayaan.
Dhinaca kale, joojinta sigaarka waxay kordhisaa halista miisaanka oo kordha. Marka hubi inaad cuntid cunto caafimaad leh oo firfircoonow. Ugu dambeyntiina, waxaa lagugula talinayaa inaad iska ilaaliso aalkolada ama aad cabto wax kayar, maadaama taasi ay sii adkeyneyso ka-tagsiga tubaakada
Sigaar cabiddu waxay dadajisaa saameynta gabowga. Maqaarka, taas macnaheedu waa laalaab badan oo qoto dheer oo wejiga oo dhan ah, gaar ahaan afka. Sidaa awgeed, joojinta sigaarcabku waxay go'aan fiican u tahay maqaarka jidhkaaga iyo wejigaaga.
Nolosha galmada ka wanaagsan
Sida laga soo xigtay cilmi-baarista, ragga sigaarka caba waxay u badan tahay inay yeeshaan cillad kacsi marka loo eego kuwa aan sigaarka cabbin. Sida muuqata, ciladdu waxay noqon doontaa sii xumaanshaha wareegga dhiigga, laakiin looma diidin inay sabab u tahay isbeddelka hormoonnada ee tubaakadu soo saarto.
Sikastaba, haddii sababta ay tahay tubaakada, joojinta waxay ka caawisaa shaqada galmada inay caadi ku soo noqoto.
Lacag ayaad keydisaa
Marka la barbar dhigo caafimaadka, lacagtu dhib malahan. Si kastaba ha noqotee, inaad lacag ka badbaadiso joojinta sigaarka waa faa iido sidoo kale mudan in laga fiirsado.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Caafimaadka » faa'iidooyinka joojinta sigaarka